Hetsika an-tsehatra an-tsehatra teatra & fampiratiana LED fiangonana - Shenzhen Yonwaytech Co., Ltd.
AFAKA MITADY SARY FAHASOAVANA LED ERAN-TRANO ANY YONWAYTECH.
Famerenana matetika ho an'ny studio TV sy ny fandefasana mivantana izay mihoatra ny 4000Hz, miantoka ny sary mahatoky tsy misy flickering.
Ny efijery LED hofan-trano dia misy rafitra fametahana haingana miaraka amin'ny mekanika hidin-trano haingana, ny kabinetra dia azo amboarina ao anatin'ny fotoana fohy, ary ny efijery manontolo dia mifandray tsara.
Ny famolavolana fampisehoana LED fanofana ultra slim dia mahatonga ny efijery LED ho tsara tarehy kokoa. Noho izany dia tsy vitan'ny hoe manome sary maranitra sy malefaka, loko mazava sy mamirapiratra dia mitondra fampisehoana mahatalanjona, ny efijery mihitsy dia sehatra tsara tarehy sy manintona.
Ny famolavolana efijery LED maivana dia nahazo tombony betsaka ho an'ny fametrahana sy fandravana mora sy haingana, mitahiry vola be amin'ny fandidiana sy ny fandefasana.
Ny fampisehoana LED aluminium die cast dia naorina ho an'ny faharetana ary mahatanty fihodinana matetika amin'ny fanentanana sy fametrahana avy amin'ny Yonwaytech.
Amin'ny ankapobeny, ny efijery LED amin'ny sehatra dia manana processeur video toa ny X1, LVP919s, LVP615S sns mba hahazoana ny fepetra takiana sy ny fiantraikan'ny sary.
Miaraka amin'ny rafi-peo sy horonan-tsary matihanina, ny rindrina LED amin'ny sehatra dia afaka mamorona sehatra virtoaly sy vokatra miloko mazava.
Ny YONWAYTECH LED dia manolotra vokatra feno amin'ny Indoor & Outdoor Rental LED Display ho an'ny hetsika, sehatra, fivarotana, studio fahitalavitra, efitrano fandraisam-bahiny, fametrahana AV matihanina ary toerana hafa.
Azonao atao ny misafidy ny andian-dahatsoratra mety amin'ny fangatahana hofan-tranonao.
Pitch Pitch avy amin'ny P1.953mm ka hatramin'ny P4.81mm ho an'ny fampirantiana LED fanofana anatiny ary avy amin'ny P2.976mm ka hatramin'ny P5.95mm ho an'ny efijery LED fanofana ivelany.
Antsipirihan'ny fampisehoana LED fanofana sehatra ho an'ny kaonseritra, teatra, hetsika am-piangonana.